Kismaayo News » Sh. Axmed Madoobe oo ka hadlay shir ka dhacay Nairobi
Sh. Axmed Madoobe oo ka hadlay shir ka dhacay Nairobi
Kn:Sh. Axmed Madoobe, gudoomiyaha maamulka ku meel gaarka ee Kismaayo oo ka qaby-galay shir maanta ka dhacay magaalada Nairobi ayaa bixiyay warbixin dhinacyo badan taabanaysa.
Shirka oo ay goobjoog ahaayeen siyaasiyiin ay ku jiraan kuwo wax ka soo qabtay hogaanka dalka, odayaal dhaqameed, culimo-awdiin, aqoonyahan iyo qaar kamid ah indheer garadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ayaa Sh. Axmed wuxuu kaga hadlay maxsuulkii ka soo baxay kulankii ay wada galeen wafuuddii Dawladda ka socday ee todobaad ka hor ay ku kulmeen Kismaayo.
Sheekha ayaa yeeshay inuu is faham dhexmaray maamulka uu gudoomiyaha u yahay iyo wasiiradda Dawladda, wuxuuna intaasi ku daray inuu qorshaynaayo inuu u socdaalo Muqdisho, si ay u sii anba qaadaan wada xaajood dhex mara xubnaha ugu sareeya dawladda oo markaasi uu oola jeeday madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha.
Ayadoo wararka in isfaham laga gaaray arimaha Jubbooyinka ay ka soo baxayeen dhinaca Dawladda ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horaysay ee maamulka Kismaayo ka arimiyaayi ay si waafi ah oo buuxda si fagaare ah u shaaciyaan inay isfaham la gaareen dawladda dhexe.
Wax garadkii iyo masuuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay go’aanka geesinimada leh ee ay qaateen maamulka Kismaayo, kaasi oo ku aadan xakamaynta arimaha calawsan ee Jubbooyinka iyo sidii loogu xalin lahaa qaab nabadeed.